OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: December 2013
By ဒီဗွီဘီ 31 December 2013
ဒီဗွီဘီက ရွေးချယ်ထားတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ထူးခြားထင်ရှား မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ကို ဒီဗွီဘီ ပရိသတ်တွေက မဲအများဆုံး ပေး ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီဗွီဘီ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း သတင်းမီဒီယာတွေမှာ အလေးပေးဖော်ပြခံရသူ ၁၀ ဦးကို ရွေးချယ်ကောက်နှုတ်ပြီး ဒီဗွီဘီ ပရိသတ်တွေရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး၊ အလေးစားဆုံး၊ တနည်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့အတွေးအမြင်ထဲမှာ အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး သူတယောက်ကို မဲပေးရွေးချယ်ပေးဖို့ ဆန္ဒပြုစေခဲ့တာပါ။
ဒီဗွီဘီ သတင်းဌာနရဲ့ မြန်မာပိုင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဖတ်ရှုသူ ပရိသတ်ပေါင်း ၂၀၆၆၂ ယောက်တို့က ဆန္ဒပြု မဲပေးခဲ့ကြရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က ဆန္ဒမဲပေါင်း ၁၃၈၉၂ ရရှိပြီး မဲအရေအတွက် စုစုပေါင်းရဲ့ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အများဆုံးရရှိသွားတာပါ။
ဒုတိယအများဆုံးကတော့ မဲပေါင်း ၄၇၈၇ မဲနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး ဦးဝီရသူ ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကတော့ ၄၇၅ မဲနဲ့ တတိယ မဲအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နော်အုန်းလှက ၃၄၉ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး စတုတ္ထမဲအများဆုံးပါ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်က မဲပေါင်း ၂၃၀၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးက ၁၉၆ မဲ၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံးလက်ရွေးစင် မသန်းသန်းထွေးက ၁၉၅ မဲ၊ မယ်စကြ၀ဠာ မြန်မာ- မိုးစက်ဝိုင် က ၁၁၆ မဲ၊ သမ္မတပြောခွင့်ရ ဦးရဲထွဋ်က မဲပေါင်း ၁၁၀၊ အဆိုတော် အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်က ၄၄ မဲနဲ့ အခြားမဲဆန္ဒပေါင်း ၂၆၈ မဲ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗွီဘီဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ဖတ်ရှုအားပေး မဲရွေးချယ်ပေးကြသူများကို ဒီဗွီဘီက အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိပါ တယ်။ မဲအများဆုံးပေး ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ဟာ ဒီဗွီဘီက ချီးမြှင့်ပေးပို့မယ့် ဂုဏ်ပြု လက်မှတ်နဲ့ ဆုဖလားကို လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမှာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးဖို့ လာရောက်တဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ကေအိုင်အေ)ရဲ့ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော်ကို ကချင်ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ဆင်မြန်းထားတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ ကြိုဆိုမှု က ကချင်ပြည်သူတွေအကြား သူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့တွက်ထားတဲ့ အာဏာပိုင်တွေအတွက် အံအားသင့် စရာ တခု ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့နယ်မှာ မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့တွေ အကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ဟာ အများထင်မှတ်မထားဘဲ ရန်ကုန်ကို သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်မှာ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို စမ်းချောင်းမြို့နယ်က ဘတ်ပ်တစ် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာ ရန်ကုန်ရောက် ကချင်လူမျိုးတွေကို တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ကချင်လူမျိုး အဆိုတော်တွေအပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဦးတေဇ တို့လို လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်ကို လျှောက်ထားခဲ့ ပါတယ်။
မီဒီယာနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတတ်ပြီး နှိမ်ချတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ရဲ့ တည်ကြည်မှု ဂုဏ်သရေ ဟာလည်း သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို ဖြစ်စဉ်တခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ သဘောတူညီချက်တွေကို လတ်မှတ်ရေးထိုးဖို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဒီဗွီဘီရဲ့ မေးမြန်းတာကို သူက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ဟာ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးပြီး တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ အစိုးရ ၀န်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ထဲကို သာမာန်တပ်သား အဆင့်ကနေ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ် အဆင့်ထိ တက်လှမ်းခဲ့သူ တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်လာ လိမ့်မယ်လို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေက မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
By DVB 31 December 2013
DVB readers have spoken, and their voice was loud and clear: the Burmese Person of the Year for 2013 is Gen. Gun Maw Sumlat, the vice-chief of staff of the Kachin Independence Army (KIA).
We offeredaselection of the biggest news-makers of the past year and asked readers to vote for one – their favourite, their most respected or simply the person they thought was the most prolific.
Second was outspoken Buddhist monk, U Wirathu, with 4,787 votes; third was Dr. Cynthia Maung with 475 votes; and fourth was activist Naw Ohn Hla with 349.
Other votes: Zaw Zaw (230); Phwe Phwe (196); Than Than Htwe (195); Moe Set Wine (116); Ye Htut (110); Irene Zin Mar Myint (44); and others (268).
DVB would like to thank its readers for their overwhelming support. Gen. Gun Maw will now receiveacertificate and an engraved trophy from DVB to commemorate this occasion.
Gen. Gun Maw Sumlat, vice-chief of staff of Kachin Independence Army
Hundreds of well-wishers wearing traditional Kachin costumes welcomed the Kachin Independence Army (KIA) Vice Chief of Staff Maj-Gen Gun Maw Sumlat when he arrived in Myitkyina, the Kachin state capital, in October to negotiate peace withaBurmese government delegation which until then had drastically underestimated his influence.
When hostilities between Burmese government forces and the KIA intensified in Mansi Township in November, Gun Maw bravely paidahistoric visit to Rangoon where he met with media, spoke at the Kachin Baptist Church, schmoozed with Kachin celebrities and generally charmed each and every political and business figure who met him.
Media-savvy but humble, Gun Maw exudesadeep sense of integrity. He says he views peace asaprocess, unlike the Burmese government which defines peace by the number of agreements it signs.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 7:44 PM No comments:
Labels: Burmese, English
The Hot News Journal Interview With KIA's General S. Gun Maw
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 9:21 AM No comments:
ဗမာအစိုး၇၇ဲ့ယုတ်မာချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပြီ
ကချင်ပြည်က ရှမ်းနီလူမျိုးစုတွေ December 20, 2013 ၇က်နေ့KIO/KIA ကိုဆန္ဒပြမဲ့ အစီအစဉ်ကို မှတ် တမ်းတင်ဖို့KIO Technical Team ရုံးရှေ့ မှာ CCTV ကင်မ၇ာ တွေလာေ၇ာက်တပ်ဆင်တဲ့ အထူး၇ဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်း တွေ့ ရှိ၇ပါတယ်။
ဗမာအစိုး၇အနေနဲ့ရှမ်းနီလူမျိုးစု တွေကိုအသုံးချပြီး အခုလိုညစ်ပတ်တာဟာ ပထမဆုံးမဟုတ် သလို နောက်ဆုံးလည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကချင်ပြည်မှာ ကျန်လူနဲစုများအဖြစ် ရှမ်းလူမျိုးစုတွေအပြင် တိုင်း၇င်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗမာလူမျိုးစု၊ ချင်းလူမျိုးစု၊ နာဂလူမျိုးစု၊ ဂဒူး-ဂဏန်းလူမျိုးစု များလည်းနေထိုင်ကြသည့်ပြင် နစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာ ကြသော နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည့် ဂေါ်၇ခါး၊ အိန္ဒိယ၊ ပန်ချာဘီ နှင့် တရုပ်လူမျိုး များလည်း နေထိုင်သော အ၇ပ်ဒေသဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
ကချင်ပြည်တွင် နေထိုင်သော ရှမ်းလူမျိုးဟုဆို၇ာတွင်လည်း ရှမ်းနီ(ရှမ်းဗမာ)၊ ခန္တီးရှမ်း၊ ရှမ်းကြီး(Tai Yai)၊ Tai Dam(ခေါင်းပေါင်းအနက်-ရှမ်း) နှင့် အခြား ရှမ်းမျိုးနွယ်မျိုးကွဲ အတော်များများ နေထိုင်ကြ ပါသည်၊ ၄င်းရှမ်းမျိုးနွယ်ကွဲတွေထဲက ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ အများစုဟာ မိုးညှင်း၊ မိုးကောင်း၊ ဟိုပင်၊ နမ္မား ၇ထားသံလမ်း တလျှောက် နေထိုင်ကြပြီး ဗမာအစိုး၇ အဆက်ဆက် အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်မှုအောက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည့် နည်းတူ ဗမာ့တပ်မတော်မှ ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ ကျေးရွာတိုင်းနီးပါး ပြည်သူ့ စစ်များ ဖွဲ့စည်းပေးကာ နယ်မြေ စိုးမိုးေ၇း၊ စစ်ဆင်ေ၇းများ၌ ၎င်းတို့ ကို လိုသလို အသုံးချခဲ့သည်မှာ ဗိုလ်နေ၀င်း ၏ မဆလ လက်ထက်မှ ယခုတိုင်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်သား အားလုံးသိကြပါသည်၊ ဗမာတပ်နှင့် ရှမ်းဗမာ ပြည်သူ့ စစ်တို့ မှ ကချင်နှင့် ကျန်တိုင်း၇င်းသားများကို အနှစ်(၅၀)ကျော် ပေါ်တာဆွဲ နိပ်စက် ခဲ့ကြသည်ကို ကချင်ပြည်သူများ ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပါ၊ အဆိုးဝါးဆုံး အဖြစ်အပျက် တခုမှာ လွန်ခဲ့သော ၁၉၇၆ အောက်တိုဘာလ ၀န်းကျင်ခန့် က ဟိုပင်၊ မိုးညင်းနယ်တ၀ိုက် ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ ပြည်သူ့ စစ်တို့ မှ တွေ့ သမျှ ကချင်လူမျိုးများကို လက်နက်အာကိုးဖြင့် ၇က်၇က်စက်စက် လိုက်လံ ပစ်သတ်ခဲ့ကြသည်ကို ကချင်လူမျိုး များ ကောင်းကောင်း မှတ်မိကြပါသည်၊ ကချင်လူမျိုးများ အနေဖြင့် ရှမ်းလူမျိုးစုကြီးနှင့် အနစ် ၇ာထောင်ချီ ညီအကိုကဲ့သို့အတူနေထိုင်လာခဲ့သဖြင့် ရှမ်းနှင့် ကချင် အကြား ပြဿနာမရှိခဲ့ကြပါ၊ ၄င်း ဟိုပင်၊ မိုးညင်း အေ၇းအခင်း တွင်လည်း ၇န်သူအစစ် အမှန်ကို ကချင်တို့ သိရှိနားလည်ကြ၍ ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ တို့ အပေါ် ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း ဟိုပင် မိုးညင်း အေ၇းအခင်း၌ ကချင်လူမျိုး အတော်များများ မြစ်ကြီး နား၊ ဗန်းမော်မြို့ ကြီးများသို့ထွက်ပြေး လွှတ်မြှောက် ကြသူများလည်း မနည်းကြပါ၊ စာေ၇းသူ၏ ဦးလေး တော်စပ်သူ ၂ဦးမှ တစ်ဦးမှာ ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ တို့ ၏ ၇က်၇က်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံ၇ပြီး ကျန် ဦးလေးတစ်ယောက်က မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ထွက်ပြေးေ၇ာက်ရှိလာပါသည်၊ ထိုအချိန် မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင် နေထိုင်ကြသော ကချင်လူမျိုးများမှာ နှစ်တစ်၇ာပြည့် ပွဲတော် ကျင်းပ၇န် နေ့ မအားညမအား ဖြစ်နေချိန် ထိုကဲ့သို့ခါးသီးသော အဖြစ်အပျက်များကို အံကျိတ်သည်းညီး ခံခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကချင်လူမျိုးနှင့် ရှမ်းလူမျိုးတို့ ကြား နေ၇ာဒေသ အတော်များများမှာ ထာ၀၇မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ ကာ အတူတကွ နေထိုင် ကြသော်လည်း ကချင်ပြည်မှ ဗမာစကားကိုသာ အဓိကထားပြောဆိုသော ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ တို့၏ ဗမာ အစိုး၇ အဆက်ဆက်အား ယနေ့ တိုင် အလုပ်အကြွေးပြု ကူညီနေခြင်းမှာ များစွာ စိတ်ပျက် စ၇ာ ကောင်းလှ ပါသည်၊ ကျန်ရှမ်းလူမျိုးများ အတွက်လည်း မကောင်းပါ။ ပြည်တွင်းစစ်၏ အကျိုးဆက် များကို ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ များသာမဟုတ် တိုင်း၇င်းသားပြည်သူတ၇ပ်လုံး အနစ်(၅၀)ကျော် အလူးအလဲ ခံစားကြ၇သည်ကို ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ အမျိုးသားများ နားလည် လက်ခံသင့်ပါသည်။
ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ လူမျိုးစုများအနေဖြင့် ဒီမိုကေ၇စီ ပြုပြင်ပြောင်လဲေ၇းဖြစ်စဉ်တွင် ဗမာအစိုး၇ အဆက် ဆက်မှ အသုံးချခဲ့မှုများမှ ရုန်းထွက်ပြီး ကချင်ပြည်၏တိုးတက်၇ာတိုးတက်ကြောင်း နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌန်းခွင့် ပြည်သူ့ တိုက်ပွဲ၌သာ ပါဝင်သင့်ပါသည်၊ ဗမာအစိုး၇၏ နဖါးကြိုးမှလွှတ်မြှောက်၇န် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။
ရှမ်းနီ/ ရှမ်းဗမာ များအနေဖြင့် ဖယ်ဒ၇ယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်အောက် ကချင်ပြည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌန်းခွင့် ၇ရှိသောအခါ ရှမ်းအမျိုးသားအားလုံး၏ အခြေခံ၇ပိုင်ခွင့် များကိုတောင်းဆိုခြင်းမှာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် သော ကိစ္စဟု မှတ်ယူနိုင်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ သော နိုင်ငံေ၇း အခင်းအကျင်းတွင် KIO/KIA ကိုဆန္ဒပြမှုဟာ ဗမာအစိုး၇နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကချင်ပြည်သူလူထုနှင့် KIO/KIA အား အကျပ်ကိုင် ဆန့်ကျင်နေခြင်းသာ ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂလိက အတွေ့ အကြုံနှင့် အမြင်တို့ ကို တင်ပြလိုက်၇ပါသည်။
အညတြ ကချင် စစ်သည်ဟောင်း တစ်ဦး
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:50 PM No comments:
မင်းအောင်လှိုင်ပြောတဲ့ အနာဂတ် စစ်ကျွန်ဗမာနိုင်ငံနဲ့ပဒိုင်းသီး၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ
မင်းအောင်လှိုင်ပြောတဲ့ အနာဂတ် စစ်ကျွန်ဗမာနိုင်ငံနဲ့ပဒိုင်းသီး၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ
၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ညနေပိုင်းတွင် တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူ ကြူလှသည် အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါ ၍ ဘားအံ တပ်နယ်ရှိ တပ်နယ် ခန်းမတွင် အရာရှိ/ စစ်သည် မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အမှာစကား ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများတွင် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မည် ဆိုသည့် နိုင်ငံတော် အကြီး အကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စရပ်များတွင် တပ်မတော်မှ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံ တကာတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နေသော နိုင်ငံများကဲ့သို့ မိမိနိုင်ငံ ကိုလည်း တိုးတက် စေလိုကြောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ရှိနေခြင်းသည် မိမိတို့ နိုင်ငံသားတွေပဲ နစ်နာရကြောင်း၊
အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီကို ရယူလိုပါက လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို မစွန့်လွှတ်စရာ မရှိသလို ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း မလွဲမသွေရယူ ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသည် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက် အတွက်၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်အတွက် ရေးဆွဲထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ပြည်ထောင် စု တိုင်းရင်းသား အားလုံးအတွက် လူတန်းစား အလွှာ အသီးသီးမှ ပါဝင်သည့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် များက စနစ်တ ကျ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့်အတိုင်း အမျိုးသား နိုင်ငံရေးအခန်း ကဏ္ဍတွင် တပ်မတော် ပါဝင်နေရခြင်းမှာလည်း နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု ရင့်ကျက် ခြင်း၊ ပြည်သူပြည်သားများ၏ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ် များ၊ ဥပဒေ နှင့်အညီ ကျင့်ကြံ နေထိုင်ခြင်းများ အတွက် ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော် သားများသည် တိုင်းပြည်ကို ချစ်သည့်စိတ်၊ ကာကွယ် လိုသည့်စိတ်၊ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် စိတ်များဖြင့် မိမိ သဘော ဆန္ဒအလျောက် ဝင်ရောက် အမှုထမ်း ကြခြင်းမှာ တပ်မတော်၏ ထူးခြားသည့် ဝိသေသ ဖြစ်ကြောင်း၊
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းတွင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်က အခြေခံ သန္ဓေ တည်ခဲ့သော တပ်မတော် အား နောက်ပိုင်းကာလ ခေါင်းဆောင် အသီးသီးမှ သူ့ခေတ်သူ့ စနစ်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဦးဆောင်မှု ပေးပြီး စည်းကမ်း ကောင်းမွန်မှုနှင့် အမိန့်နာခံမှု အခြေခံကောင်းများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ ကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကာလ နောက်ပိုင်းမှ ယနေ့တိုင်အောင် ဆယ်စုနှစ်အလိုက် ကြည့်ပါက ရှိသည့် အင်အားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို လုံခြုံအောင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက် နိုင်သည်မှာလည်း မည်သို့မှ မငြင်းနိုင်သည့် တပ်မတော်၏ သမိုင်းအစဉ် အလာကြီးမားမှု ဖြစ်ကြောင်း၊
ယင်းထူးခြားသည့် ဝိသေသနှင့် ကြီးမားသည့် သမိုင်းအစဉ် အလာများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်မှ အားကိုး အားထား ရသည့် တပ်၊ ပြည်သူက ယုံကြည် လက်ခံသော တပ်ဖြစ်စေရေး စည်းလုံး ညီညွတ်စွာဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
ခွန်ဒီးယမ် FB မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 8:09 PM No comments:
“ဒီဇိုင်နာတွေက သူဌေးတွေ မဟုတ်ဘူး”
မစပ်စု| December 12, 2013
ဒီဇိုင်နာ ဆန်းဘောက်၇ာ(ဓာတ်ပုံ - ဆန်းဘောက်၇ာ facebook မှ)
ကချင်တိုင်းရင်းသူ ဒီဇိုင်နာ ဆန်းဘောက်ရာဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ပြီး Shayi အမည်နဲ့ လက်ဖြစ် အမျိုးသမီး အဝတ်အထည် တွေကို ဖန်တီး ရောင်းချနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Shayi ဆိုတာ ကချင် ဘာသာစကားအရ “မိန်းကလေး” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့အတွက် အဲဒီတံဆိပ်နဲ့ အမျိုးသမီး ဝတ်စုံတွေကိုသာ ထုတ်လုပ် ရောင်းချတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူ ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းချတဲ့ ဝတ်စုံတွေဟာ ရိုးရာ ဒီဇိုင်းကို အခြေခံပြီး ဆန်းသစ် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ လူကြိုက်များကြပြီး သုံးစွဲထားတဲ့ ပိတ်စနဲ့ Accessories တွေအပေါ် လိုက်လို့ တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ်သောင်းဂဏန်းကနေ သိန်းဂဏန်း အထိ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါ တယ်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ နေရာတနေရာ ခိုင်မာ နေပြီဖြစ်တဲ့ Shayi ရဲ့ ဦးဆောင်သူ ဒီဇိုင်နာ မဆန်းဘောက်ရာကို လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့ ကချင်ရိုးရာအထည် ဖက်ရှင်ရေစီး အကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံတကာမှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Miss ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပရိသတ် ဝေဖန်မှုရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အမျိုးသားဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းတွေအကြောင်း၊ ကချင်တိုင်းရင်းသူတဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ဘေး ဒဏ်သင့် ဒေသတွေက သူတို့ ကချင် တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဧရာဝတီက မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ လတ်တလောမှာ အနုပညာရှင် တော်တော်များများကို ကြည့်လိုက်ရင် ပြန်လည်ဆန်းသစ် ထားတဲ့ ကချင် ၀တ်စုံလေးတွေကို တော်တော်များများ ၀တ်လာကြတာတွေ့နေရတယ်။ ဒါဟာ အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ ကချင်ဝတ်စုံတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုလာတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။
ဖြေ။ ။ ရပါတယ်။ အခု ၀တ်နေကြတာပဲလေ။ အနုပညာသမား Customer တွေ ကျမဆိုင်မှာ ရှိနေ ကြတာပဲ။ အခု Miss ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆိုလည်း ကချင်ထည်တွေ ၀တ်ဖို့ဆိုပြီး ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ဆိုလည်း သူ Miss International သွားပြိုင်ဖို့ အတွက် လုပ်ပေးရဖို့ ရှိတယ်ပေ့ါ။ နောက် ပြီးခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာတို့ ပွဲလုပ်တုန်းက၊ တခြား Miss တွေ မြန်မာပြည်ကို လာတုန်းက သူလည်း ကချင် ၀တ်စုံ ၀တ်တာပဲပေ့ါ။ ကချင်ဝတ်စုံက တခြားတိုင်းရင်းသား ၀တ်စုံတွေနဲ့ တန်းစီလိုက်ရင်တောင် ထင်းကနဲလင်းကနဲ ဖြစ်စေတာ ပေ့ါ။ အရမ်း အရောင်စုံ ဖြစ်တာတခုရယ်၊ နောက်ပြီး အရမ်းတန်ဖိုး ရှိတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် ငွေထည်တွေ ပါမယ်၊ ဟန်းမိတ်တွေ အများကြီးပါမယ်၊ ပြီးရင် ပိတ်စတွေ ကအစ ဂျပ်ခုပ်ထည်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒါက ဒီဇိုင်းတွေ ထူးပြီး မထွင်ထားဘူး ဆိုရင်တောင်မှ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တင် ဈေးကြီးတဲ့ အရည်အသွေးက သူ့ဘာသာသူ ထွက်နေတာပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း လူတွေစိတ်ဝင်စားမှု ပိုများလာတယ်လို့ မြင်တယ်။
ဖြေ။ ။ ကျမရဲ့ Customer က အယောက် ၁၀၀ ရှိရင် ၉၉ ယောက်က သာမန်လူတွေပဲလေ။ တယောက် လောက်သာ အနုပညာရှင် ဖြစ်မယ်။ ၉၉ ယောက်တောင် ပြောလို့မရပါဘူး၊ ၁ ထောင်မှာ ၉၉၉ ယောက်က သာမန်လူတွေ ချည်းပါပဲ။ ကျမရဲ့ Shayi တံဆိပ်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အားပေးပြီး ၀ယ်ယူနေကြတဲ့သူ အကုန်လုံးကတော့ ဒီကချင်ရိုးရာရဲ့အရသာကို ကြိုက်ကြလို့သာ အားပေးနေ ကြတယ် ဆိုတော့ တလကို ကျမ အင်္ကျီ တသောင်း ရောင်းရတယ်ဆိုရင်၊ ဒါက လူအယောက် တသောင်းက ဒါကို စိတ်ဝင်စားလို့ပေ့ါ။ ကျမ ဆိုင်ကလည်း ရောင်းနေရတာပဲ ၀တ်နေကြတာပဲ ဆိုတော့ သာမန်လူတွေ စိတ်ဝင်စား လို့သာ ဒီဈေးကွက်ကြီးက ရှိနေတာပါ။ နောက် ကျမအထင် ကတော့ ဒီ ကချင်ထည်တွေကို တခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေရဲ့ အထည်တွေထက် ပိုပြီး ၀တ်လာ ကြတာ၊ လူတွေအမြင်မှာ ဒီဇိုင်းလှတယ်လို့ မြင်ပြီး ပိုဝတ်ချင်လာတာဟာ ဒီဇိုင်နာတွေကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု တွေထဲမှာ ဒီဇိုင်နာတွေ ရယ်လို့ ထွက်လာတာ မရှိဘူး။ ကျမတို့ ကချင်မှာဆိုရင် ကျမ အပါအ၀င် တခြား ကလေးတွေလည်း ရှိသေး တယ်ဆိုတော့ ကျမတို့က မီဒီယာတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကချင်ထည်တွေကို များများ ဒီဇိုင်းထွင်ပြီး များများချုပ်ပြလေလေ၊ လှတယ်လို့ မြင်လာပြီး လူတွေက လိုက်ဝတ်ချင် လေလေ ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီအတွက် ဒီဇိုင်နာတွေက တော်တော်ကို တာဝန် ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဈေးကွက်ကြီး ဖြစ်လာဖို့၊ မဖြစ်လာဖို့ဆိုတာပေ့ါ။ ဥပမာ – ချင်း ထည်တွေဆိုလည်း တော်တော် လှတာ တွေ ရှိပါတယ်။ ဟန်းမိတ်တွေမှာဆိုလည်း လှတာတွေ ရှိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ချင်းထည် အတွက်ကို သီးသန့် ဒီဇိုင်နာရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ကျမဆိုရင် နိုင်ငံတကာ ပွဲတွေမှာ ဒီ ကချင်ထည်ကို အဓိကထား ပြပေးတယ်ဆိုတော့ ဈေးကွက် ကနေ ကျမဆီကို Customer တွေ မလာခဲ့ရင်တောင်မှ နီးစပ်ရာတိုင်းမှာ ဒီကချင်ထည်တွေ ချုပ်ဝတ်ကြတယ်။ ဥပမာ – ဈေးထဲမှာဆို ကချင်ထည်တွေ၊ ပိတ်စတွေ ပိုပြီး ရောင်း ကောင်း လာတယ် ဆိုတာမျိုးပေ့ါ။ ကျမ ချုပ်ပေးလိုက်ရတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကျမလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကို လူတွေမြင်ပြီး ၀တ်ချင်လာတယ်။ ကျမကတော့ အဲဒီလိုမျိုး မြင်မိတယ်။
မေး။ ။ အခုလို ကချင်ဝတ်စုံတွေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အလေးထား ၀တ်ဆင်လာမှုအပေါ် ကချင် တိုင်းရင်းသူ တယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမကတော့ နိုင်ငံခြားက ပစ္စည်းတွေကို အားပေးနေမယ့်အစား၊ ကိုယ့်ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေး မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံ တခုလုံးရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒါက အကျိုးရှိပါတယ်။ နောက် လူမျိုးအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ ကချင် ၀တ်စုံကို လူတိုင်းလူတိုင်းက ၀တ်ကြတယ်ဆိုရင် ကချင်ဆိုတာကို မကြားဘူး၊ မသိဖူးတဲ့သူတောင် ဒါကိုတွေ့ရင် ဒါကဘာဝတ်စုံလဲ၊ လှတယ်ဆိုပြီး သိသွားတာပေ့ါ။ အဲဒီအတွက် ကချင်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့လည်း ဂုဏ်ယူတယ်။ တနိုင်ငံလုံးရဲ့ စီးပွားရေးအမြင် နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူများနိုင်ငံကို ပိုက်ဆံရောက်သွားမယ့်အစား ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ ပြည် တွင်းဈေး ကွက်ကြီး ကြီးလာတယ်ဆိုတာက နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအနေနဲ့လည်း ကောင်းတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဈေးကွက် ကြီးလာလေ၊ ပြည်တွင်းကလူတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ရလေပေ့ါ။ အဲဒီလိုမျိုး ဆိုတော့ အကုန်လုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ နိုင်ငံတခုလုံး အတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်၊ လူမျိုးတခုလုံး အတွက်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျမက ကချင် တိုင်းရင်းသူလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကချင်ဝတ်စုံကို လူတွေဝတ်လေ ကျမကတော့ ကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူလေပါပဲ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျမ နိုင်ငံခြားပွဲတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်း ရှိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီ ကချင်ထည်ကို ထည့်ဖြစ်အောင် ထည့်ဖို့ ကြိုးစား ပါတယ်။ ဒါကို တန်ဖိုးတက်သထက် တက်အောင်၊ လှသထက် လှအောင် အမြဲကြိုးစားပြီး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဧရာဝတီအတွက် သီးသန့် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဆောင်းဝတ်ရည်မေရဲ့ ၀တ်စုံ ကိုကော ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ဖြစ်တာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမ အမြဲတမ်း လုပ်နေကျပုံစံ၊ ကြည့်လိုက်ရင် ရိုးရာရဲ့ Taste လည်း မပျက်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒါသည် ပွဲလည်း တိုးလို့ရတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် ဒါဟာ Handmade မို့လို့ ဈေးကြီးမှန်းလည်းသိတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ ရိုးရာပစ္စည်းတွေက တန်ဖိုး အရမ်းရှိပြီးတော့ လူတွေအမြင်မှာ ၀တ်လို့မရတဲ့ ၀တ်စုံမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး။ ရိုးရာပုံစံလည်း မပျောက်ရဘူး။ သူသည် ထသွားထလာပဲ ၀တ်မလား၊ အဲဒီလိုပုံစံမျိုး လည်း လုပ်ပေးလို့ ရတယ်။ ပွဲနေပွဲထိုင် သွားမလား။ ပွဲနေပွဲထိုင်ဆိုတဲ့ နေရာ မှာလည်း Dinner သွားမလား၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲ သွားမလား။ နိုင်ငံတော်ပွဲပဲ သွားမလား၊ Miss ပြိုင်ပွဲကြီးပဲ ပြိုင်မလား။ ဒီရိုးရာ ပုံစံလေးလည်း မပျက်အောင်၊ သူဝတ်ချင်တဲ့ နေရာအနေအထားနဲ့ အကုန်လိုက်ဖက်အောင်၊ တန်ဖိုး နည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုး ကြီးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေရာတိုင်းမှာ ရိုးရာပုံစံလေးတွေကို ၀တ်လို့ ရအောင် ကျမလုပ်တဲ့ Shayi Brand က အမြဲတမ်း အဲဒီလို ပုံစံမျိုးပဲ သွားလေ့ရှိတယ်။ အခု သူဝတ် ထားတဲ့ ဂါဝန် အတိုလေးဆိုရင် ဟိုတယ်ပွဲဆိုလည်း တက်လို့ရပြီး နိုင်ငံတော်ပွဲရဲ့ Dinner ပွဲ တခုခု မှာဆိုလည်း သူသွားလို့ရပြီ။ ကြည့်လိုက်ရင် ရိုးရာပုံစံလည်း မပျက်ဘူး၊ ခေတ်လည်းမီတယ်။ တန်ဖိုးရှိရှိ လည်း ၀တ်လို့ရတယ်။
မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ Miss ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ အားနည်းမှုတွေ ရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရတဲ့ Miss တွေကို ဘယ်လို ဒီဇိုင်းမျိုးတွေ ချုပ်ပေးလိုက်တာလဲ ဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ညံသွားခဲ့တာ အားလုံးလည်း အသိပါပဲ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာကို ချပြရတဲ့ တကယ့် အမျိုးသားဝတ်စုံကို ဖန်တီးပေးမှုတွေအပေါ် အားရကျေနပ်မှုမရှိကြဘူးပေါ့။ ဆိုတော့ … ဒါတွေက ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ ဖန်တီးမှု အပိုင်း အားနည်းချက်တွေလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေက နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံကို နိုင်ငံတကာက လူတွေအမြင်မှာ “ဟာ” ကနဲ ဖြစ်သွားအောင် မချပြနိုင်ရလဲ ဆိုတာ ဒီဇိုင်နာ တယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လို သုံးသပ်ချင်ပါလဲ။
ကျမ ပြောချင်တာက ကျမတို့ ကချင်ဝတ်စုံကို ဆန်းသစ် ပေးပါဆိုရင် ဒါက ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံလေ။ ရိုးရာအတိုင်း ချွတ်စွပ်လိုချင်ရင် ကျမတို့ ဒီဇိုင်နာတွေ မလိုဘူးလေ။ အင်္ကျီချုပ်တဲ့ သူတွေကို အပ်လိုက်လို့ ရတယ်။ သူတို့က ဒီဇိုင်နာရဲ့ ဒီဇိုင်းလည်းပဲ လိုချင်သေးတယ်။ ရိုးရာအတိုင်း ခေါင်းပေါင်းဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကို သွားရမယ်၊ အမြိတ်ဆိုရင် ဘယ်လိုချရတယ် ဆိုတာကအစ လိုက်ပြီး ပြောနေတဲ့ဟာတွေက အများကြီးရှိပြီး ကျမတို့ အရမ်းကို ရင်ဆိုင်ပြီး လုပ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေ များပါ တယ်။ အဲလိုမျိုးတွေ ရှိနေသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့၊ အဲဒီလို နိုင်ငံတော်ပွဲတွေမှာ ကျမတို့ ၀တ်စုံ လုပ်ရရင် အခက်အခဲတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။
ကျမဆိုရင် ကချင်ဝတ်စုံကို တော်တော် ကွဲကွဲပြားပြား လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမတို့ ကချင်ဝတ်စုံက ကျမတို့ဆီမှာ မျိုးနွယ်စုက အများကြီး ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့၊ နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေက အဲဒီလောက် အများကြီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ကျမကို ဘယ်သူမှ လက်ညှိုး မထိုး နိုင်ဘူး။ မြန်မာဝတ်စုံဆိုရင် Point ၀ိုင်းလုပ်မယ့်သူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒီဇိုင်နာတွေက အဲဒီပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ လုပ်ရကိုင်ရတာ အရမ်းခက်ပါတယ်။
အခု ဆီးဂိမ်းဆိုရင် ကွင်းထဲမှာ ကတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးရဲ့ ၀တ်စုံတွေကို ကျမတို့ ဒီဇိုင်နာတွေ အကုန်လုံး က ၀ိုင်းလုပ် ပေးရတယ်။ အစကတည်းက ဒီဇိုင်နာတွေခေါ်ပြီး လုပ်ခိုင်းတယ် ဆိုက တည်းက သူတို့က ဆန်းသစ်ချင်လို့၊ ဒီဇိုင်း ဆန်းဆန်းလေး လိုချင်လို့ လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့က ဒီဇိုင်းဆန်းလိုက်ရင် လူကြီးတွေက အကုန် ပြန်ဝေဖန်ပြီး အကုန်ပြန်ပြောင်းခိုင်းတယ်။ ၀တ်စုံတစုံဖြစ်ဖို့ကို ကချင်ဆို ကချင်က လူကြီးတွေ ဆင်းလာတယ်။ ချင်းဆို ချင်းလူကြီးတွေ အကုန်လုံး ရန်ကုန်မှာ အစည်းအဝေး အကြိမ်ကြိမ် ထိုင် ဆုံးဖြတ်ပြီး နောက်ဆုံး သူတို့ရိုးရာ ဘောင်ထဲပဲ ပြန်ဝင်သွားတာပဲ။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အခါမှာ ဒီဇိုင်နာတွေ လုပ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ အခက်အခဲ အများကြီးရှိပါတယ်။
နောက်တခုက Miss ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတော်ပွဲ ဆီးဂိမ်းလိုဟာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမတို့က ဘတ်ဂျက် ကန့်သတ်ချက် အရမ်းရှိတယ်။ ဥပမာ – ကချင်ဝတ်စုံဆိုရင် ငွေမောင်းလည်း ပါရသေးတယ်၊ ကချင်ထမီလည်း ဖြစ်ရ သေးတယ်၊ အင်္ကျီ၊ ခေါင်းပေါင်း ခြေစွပ်လည်း ပါရတယ်။ အဲဒါကို ကျမတို့ကို ဘတ်ဂျက်ချပေးတာ အရမ်းနည်းတယ်။ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဈေးမျိုး ချပေးတာ ဆိုတော့ ကျမတို့ ဒီဇိုင်နာတွေက သူဌေးတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ နောက် နိုင်ငံတော်ပွဲ သွားပြိုင်ရတဲ့ Miss တွေဆိုရင် အကုန်လုံး စပွန်ဆာပေးရတာ။ သူများနိုင်ငံမှာ အဲဒီလို စပွန်ဆာပေးရတယ်ဆိုတာ ရှိမယ်မထင်ဘူး။ သူတို့ နိုင်ငံတော်က ပံ့ပိုး ပေးတာလေ။
ကျမတို့ဆိုရင် နိုင်ငံတကာကို ရှိုးသွားပြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ ပေးတယ် ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိဘူး။ ပိုက်ဆံဆို တပြားမှ ရတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ ၀တ်စုံတခု ကောင်းဖို့ဆိုတာ Creation ကောင်းရုံ၊ Idea ကောင်းရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ ကျမတို့ဆီမှာ ဘောင်က အရမ်း ကျဉ်းလွန်းတဲ့ အခါကျတော့ လုပ်ရ ကိုင်ရတာ အရမ်းခက်တယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ကျမတို့က ရအောင် ထိုးဖောက်ရပါတယ်။
မေး။ ။ ဒီလို နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာတွေကို နိုင်ငံတကာသိဖို့ ချပြရတဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲတွေ အတွက် ကိုတောင် ကျမတို့ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ ပံ့ပိုးမှု မရှိတဲ့အပေါ် ဘာပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမတို့က ရိုးနေပြီမို့လို့ ဘာမှ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ကျမဆိုရင် နိုင်ငံတော် ပွဲတွေကို ၂၀၀၉ ကတည်းက သွားရပါတယ်။ ၂၀၀၉ မှာ ပထမဆုံး အာဆီယံပွဲကို မြန်မာ ဒီဇိုင်နာတွေ စလွှတ်ကတည်း က အခု အချိန်အထိ တောက်လျှောက် ပါရတာပေ့ါ။ ပါရတာ၊ သွားရတာ မှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ဘာမှမရဖူးဘူး။ အခုနောက်ဆုံး ဂျပန်က အာဆီယံဖက်ရှင်ရှိုးပွဲဆိုရင် ကျမတို့သွားရ တယ်။ ဘာမှကို မရဘူး။ ထိုင်းကိုသွားရင် ထိုင်းကလူတွေက ဟိုတယ်တွေ ဘာတွေ ပေးတယ်ပေ့ါ။ ဂျပန်သွားရင် ဂျပန်က လူတွေက စီစဉ်ပေးတယ်။ တခါမှ မြန်မာပြည်က ဘာဆိုဘာမှ ထောက်ပံ့ ပေးတယ် ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ကျမတို့က ရိုးတောင် ရိုးနေပြီဆိုတော့ ဘာဆို ဘာမှကို မပြောချင်ပါဘူး။ ကျမတို့ တတွေက ကိုယ့်ကချင် ၀တ်စုံကို နိုင်ငံတကာက သိစေချင်လို့ သွားတယ်။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ရတာပေ့ါ။ အဲဒီမှာ ဘာပြန်ရလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဒီဈေးကွက်ကြီး ကြီးလာတယ်။ ဒါကတော့ ပီတိကိုစား အားရှိ၏ပေ့ါ။ ကျန်တာကတော့ ကျမတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ ဘာမှကို မရခဲ့ပါဘူး။
မေး။ ။ ကချင်ရိုးရာတွေကို ပြန်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ နေရာမှာရော မဆန်းဘောက်ရာ အနေနဲ့ တာဝန်ကြီး တယ်လို့ ခံစားမိလား။
ဖြေ။ ။ ကျမကတော့ ဒီကချင်ဝတ်စုံကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်မယ် ဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီ ကချင်ဝတ်စုံ အကြောင်းကို သေချာ သိတဲ့သူ ဖြစ်တယ်ပေ့ါ။ ပြီးတော့ ကျမ ငယ်ငယ်ကတည်းက ထိတွေ့လာတဲ့ အရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒါသည် ပွဲတက်ရင် ၀တ်ရတယ်၊ ဒါမျိုးသည် မင်္ဂလာဆောင်မှာ ၀တ်ရတာ ဖြစ်တယ်၊ ဒါသည် ခေါင်းမှာထားရတယ်၊ ဒါသည် ခြေထောက်မှာထားရတယ်ဆိုတာကို ကျမကို သင်ပေးစရာမလိုဘဲ သိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျမအတွက်က ထူးပြီး သတိထားစရာ မဟုတ်ဘူးပေ့ါ။ ကျမအတွက်ကတော့ တာဝန်မကြီးပါဘူး။
ဒီလို ၀တ်စုံဒီဇိုင်းတွေကို လုပ်ရတာကိုပျော်တယ်။ ပြီးတော့ ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ ရိုးရာပုံစံ အစစ်ကို လိုချင်ရင် ရိုးရာပုံစံပဲယူလေ။ ဒါက ဒီဇိုင်နာရဲ့ ဆန်းသစ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားဖြစ်လို့ ခေါင်းမှာ ထားတဲ့ အရာကို ကျမက ခြေထောက်မှာ သွားမတပ်လိုက်ရင် ပြီးရောပေ့ါ။ ကျမအတွက်က ဘယ်တော့မှ ဒီဟာသည် တာဝန်ကြီးတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ ဒီဇိုင်းလုပ်သမျှထဲမှာ ကချင်ဒီဇိုင်းလုပ်ရတာ အပျော် ဆုံးပါပဲ။
မေး။ ။ ကချင်ဒီဇိုင်းတွေ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရိုးရာကို ဖျက်ဆီးပြီး ဆန်းသစ်တယ်လို့ အထင် ခံရတာမျိုး၊ အပြောခံရတာမျိုး ကြုံခဲ့ရတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးလား။
ဖြေ။ ။ အဲဒီလိုမျိုး မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ကျမတို့ ကချင်လူမျိုးတွေက အချင်းချင်း ချစ်ကြတယ်။ တယောက်က အောင်မြင်လာရင် နောက် တယောက်က လိုက်ပြီး အပုပ်ချတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကချင်လူမျိုးက လူနည်းစုလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တယောက်က ထွန်းပေါက်လာပြီ ဆိုရင် တယောက်က လိုက်ပြီး Appreciate လုပ်ပေးဖို့ပဲ ၀ိုင်းပြီး စဉ်းစားကြတာ။ အပြင်က လူတွေကျတော့ ကချင်ဒီဇိုင်းကို ဒါက ရိုးရာနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ ပြောရ အောင် သူတို့က ဒီရိုးရာအကြောင်း သိတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကချင်လူမျိုးတွေပဲ ရိုးရာအကြောင်း သိတယ်။ ခုနက ကျမ ပြောသလိုပဲ ခေါင်းမှာ တပ်ရမယ့်ကိစ္စကို ခြေထောက်မှာ မတပ်ဘူးလေ။ ဆိုတော့ … ပြောစရာ ကြီးလည်း အဲဒီလောက်အထိ ရှိမနေပါဘူး။ ကျမအထင်တော့ ကျမကိုယ်တိုင် မကြားခဲ့ရဖူးသလို၊ သူများပြော တာလည်း မရှိဘူးလို့တော့ ထင်တာပဲ။ ကျမ နောက်ကွယ်မှာ ပြောကြ ရင်တော့ မသိဘူးပေ့ါ။
ဖြေ။ ။ ကျမဆိုရင် အခုလောလောလတ်လတ် တင်ပဲ အဲဒီ ဒေသကနေ ပြန်ရောက် ထားတာလေ။ စစ်ဖြစ်တဲ့ နေရာတို့ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ကို တော်တော်များများကို ကျမ အကုန်ရောက်ခဲ့ တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်နေ့က ဆိုရင် ရှိုးပွဲ သွားလုပ်တယ်ပေ့ါ။ ကချင်ရှိုးပွဲ သွားလုပ်ပြီးတော့ ဒုက္ခသည် စခန်းက ကလေးတွေအတွက် ရံပုံငွေ ရှာပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးရင် ကျမ ရန်ကုန်မှာလည်း ရံပုံငွေရှာတဲ့ ပွဲလေး ထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ ကျမတို့က စစ်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေးကတော့ သိပ်နား မလည်ပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိုးကို ထိရင်တော့ ဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး။ ဘယ်သူမှတော့ မခံချင်ဘူး။ စိတ်ဆင်းရဲရတာ မျိုးတော့ ရှိတာပေ့ါ။ ကျမကတော့ ကျမတို့ လူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ထိုင်ပြီး လက်ပိုက် ကြည့်နေမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တတ်နိုင်သလောက် ကတော့ ကိုယ်က ရန်ပုံငွေ ရှာပေး တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျမတို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားပြီးတော့ စိတ်ဓာတ် ရေးရာ အားပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျမကတော့ စစ် စဖြစ်ကတည်းက ကျမတို့ စပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ အခုချိန်ထိလည်းလုပ်တယ်။ နောက်လည်း လုပ်မှာပါပဲ။ သေနတ် မကိုင်ရုံတမယ်ပဲ။ ကျန်တာတော့ ကျမတို့ အကုန်လုံး လုပ်မှာပါပဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမတို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မို့လို့ ဒီအချိန်မှာတော့ အားလုံးကို သည်းခံ၊ ကြိတ်မှိတ် သည်းခံဆိုပြီး ကျမတို့ က အချင်းချင်း အားပေးနေကြတယ်။ ဒီအချိန် မှာတော့ အားတင်း ထားဖို့ပေ့ါ။ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ စစ်ဘေး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေ၊ သူတို့တွေပဲ ဒုက္ခ ရောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတုို့ ခံစားရသလိုပဲ ကျမတို့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ရှိနေတဲ့ ကချင်လူမျိုးတွေ အကုန်လုံးရဲ့ ခံစားချက်ကလည်း အတူတူပါပဲ။ သူတို့ကို နှိပ်စက်ရင် ကျမတို့ကို နှိပ်စက်သလိုပဲ ခံစားရတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က ဘယ်တော့မှ ငြိမ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ ကချင်တွေလည်း ငြိမ်နေ ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံး ၀ိုင်း ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းက လူတွေကို ဘာမှ အားငယ်စရာမလိုဘူးလို့ ကျမက ပြောချင်ပါတယ်။ တချိန်ချိန် မှာတော့ ကျမတို့ အလှည့်ရောက်မှာပေ့ါ။
Interview with General S. Gun Maw
THE KACHIN (SHING NRAI) JINGHPAW WUNPAWNG
THE KACHIN (SHING NRAI) JINGHPAW WUNPAWNG \_THE KACHIN
Self-determination, Federal Jet ai mung hpawm nlu dingsa Myen Asuya kaw na amyu shamat masing kaba ni hpe koi yen ga, Ninghkap ga..
Kachinland shing nrai Kachin Federated State ngu ai Bandung ndu ding sa Ngai Rawang nang Jinghpaw shi gaw Lawngwaw shanhte gaw Zaiwa ngu ai ga manawng, myit jasat yawng jahkring ga.
Kachinland shing nrai Kachin Federated State ngu byin wa ai shanieJinghpaw WP amyu sha yawng kade rai nga ga ai ta? grau reng hkra grau hkum tsup hkra jawm gaw gap sa wa ga.
Ya gaw "KACHIN" ngu ai hkringhtawng hpe lang nhtawm Tai hpyen niahpawt-hpra na amyu shamat masing kaba hpe jawm ninghkap ga.
Ngai nan gaw Zaiwa dinggai(Mawshwi Nang Mun)akashu re( Zaiwa25%, Hkahku+ Sinli 75%), ngai hkungran la tawn ai gainu jan mung Lawngwaw mying mying ai (Zaiwa 50% Lawngwaw 50% ) Maru tsawm shayi langai re.
Karai Kasangeshingteng tawn sai "KACHIN" ngu ai masha ni myit hkrum kahkyin gumdin let shakut shaja yang chyu sha Mayam prat na lawt mai na rai nga ga ai.
Daini na ten Kachin struggle hte sha gaw Myen Hpyen Dap Ningbaw ni Myen Mung masa rapdaw kaw na htingnut mat wa na matu tatut hta nloi ai majaw Laiza Conferenceahpang All Ethnic political cooperation hte sa wa nga ai ten ngai Lisu nang Lawngwaw ngu ginhka chyai nga nna "hkye hkye rai ngam taw na" hpe dum let Kachin ngu ai hkringhtawng hta jawm shakut sa wa ga law.
Yumaya Hpyen Magamgun Dingsa
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 10:08 AM No comments:
The Hot News Journal Interview With KIA's General ...
မင်းအောင်လှိုင်ပြောတဲ့ အနာဂတ် စစ်ကျွန်ဗမာနိုင်ငံနဲ...